सडक विभागलाई प्रश्न : एउटा भ्वाङ टाल्न कति चरण पार गर्नुपर्छ ? « प्रशासन
सडक विभागलाई प्रश्न : एउटा भ्वाङ टाल्न कति चरण पार गर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन बनाउन होस् वा बाटो विस्तार गर्न राजधानीका थुप्रै सडक खनिए । तर, समयमा मर्मत गर्न सरोकारवालाले चासो देखाएनन् । जसका कारण सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे बनिरहेका छन् ।
तर, राजधानीका सडकको दुर्दशा यतिमै मात्र सीमित छैन । नियमितरूपमा मर्मत नहुँदा यहाँका सडक ‘धराप’ बन्न थालेका छन् । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी चालक दुर्घटनाको जोखिममा छन् ।
यसैको उदाहरण हो, संघीय संसद् भवनको उत्तरतर्फको शाखा सडक । दिनहुँ यात्रुको बाक्लो भीडभाड हुने यो सडकखण्डमा भ्वाङ परेको झण्डै साता भइसक्यो । तर, नियमनकारी निकायले यसको मर्मतसम्भारमा चासो देखाएको छैन । पछिल्ला तीन–चार दिनयता उक्त सडकमा देखिएको दृष्य ।
सडकको भ्वाङ नपुरिएपछि नजिकैका एक पसलले यात्रुलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन पसलकै होडिङ बोर्ड राखे । ताकि मोटरसाइकल वा गाडी चालकले टाडैबाटै सचेत बन्न सकोस् ।
भोलिपल्ट सडकको बीच भागमा राखिएको होडिर्ङ बोर्ड हटाएर गिट्टी राखेर सामान्य टालटुल पार्ने प्रयास गरियो ।
पर्सीपल्ट बिहान सो ठाउँमा माटो राखियो तर पनि भ्वाङ पुरिएन ।
भ्वाङको आकार बढ्दै गयो । माटोले पनि नपुरिएपछि बेलुका भत्केको भवनका सिमेन्ट मिश्र्रित ठूलठूला रोडा राखेर पुरियो । र, छेउछाउबाट माटोले टालटुल पारियो ।
राजधानीकै मुटु वानेश्वरमै त एउटा खाल्टो तीन चरणसम्म पनि पुरिँदैन भने अन्यत्रको अवस्था के होला ?
त्यसो त दिउँसो सद्दे रहेको सडकमा बेलुकी भ्वाङ परेको देखिन्छ । निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न भएको साता दिन नबित्दै खाल्टाखुल्टी पर्ने अवस्थाले सडकको गुणस्तर प्रष्ट झल्काउँछ ।
नियमितरूपमा मर्मत भइरहनुपर्ने सडकबारे सडक विभागले चासो देखाएको छैन । जसका कारण यात्रुले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । ‘राजधानीकै सडक त समयमा मर्मत हुँदैनन् भने अन्यत्रको अवस्था झन् के होला ?’ बानेश्वर बस्ने अनिस पन्त भन्छन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम भने वर्षा भइरहेकाले भ्वाङ परेको ठाउँमा पिच गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘दिनहुँ पानी परिरहेकाले पिच गर्न नसकिएको हो, घाम लागेर ओभानो भएपछि टालिन्छ,’ उनले भने ।
Tags : सडक सडक विभाग